के कम्प्युटर ग्राफिक्स को प्रकार? दुई-आयामी (2D) र तीन-आयामी (3D): त्यहाँ ग्राफिक्स दुई मुख्य कक्षाहरू कम्प्युटर उद्योग मा प्रयोग गरिन्छ। 2D ग्राफिक्स, बारी मा, सदिश र रेखापुंज विभाजन गरिएको छ। कम्प्युटर ग्राफिक्स यी प्रकार प्रत्येक अन्य फरक छन् के बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्।
का एक रेखापुंज ढाँचा सुरु गरौँ। निष्पक्षता मा यो CG नींव राखे कि उल्लेख गर्नुपर्छ बिटमैप्स। जहाँ प्रत्येक तत्व मापदण्डहरु को एक सेट छ पिक्सल, एक ग्रिड प्रयोग गरेर छवि बनाउन को यो विधि (चमक, रंग कोड, पारदर्शिता को स्तर) महत्वपूर्ण लाभ, साथै यी लाभ को लडी, कुनै कम महत्वपूर्ण बेफाइदा छ।
को जाल गठन को सिद्धान्त को सादगी वृद्धि वा परिणामस्वरूप छवि कम गर्न नसक्नुको wraps। यो एकदम कम छ भने, हराएका वस्तुहरू, यदि वृद्धि, monstrous pixelation प्रकट हुनेछ। तपाईं जाँच गर्न चाहनुहुन्छ? इन्टरनेटमा कुनै पनि छवि डाउनलोड र प्रदान गर्नेछ अधिकतम मूल्य यो जुम सम्पादन। तपाईं सामान्य रंग मा यसलाई खोल्न भने - 800% त्यहाँ अधिकतम दृष्टिकोण, बस के तपाईं आवश्यक छ।
के रोचक छ, "डट" को मुख्य बेफाइदा यसको मुख्य फाइदा, रेखापुंज छवि हरेक समय गणना गर्नुपर्छ छैन थियो। कम्प्युटर मा ल्याउन यो पटक Suffice, र त्यसपछि यसलाई जो हामी यस लेखमा को दोस्रो भाग भेट्ने जो संग सदिश ग्राफिक्स छ, अपरिवर्तित त्यहाँ भण्डारण गरिनेछ।
लागू बिटमैप ग्राफिक्स पाठ्यक्रम इन्टरनेट मुद्रण उद्योग मा, टेलिभिजनमा, भिडियो गेम र सिनेमा, राम्रो, र,: सबैतिर छन्।
सदिश प्रक्रिया एल्गोरिदम प्रयोग कम्प्युटर ग्राफिक्स सिर्जना कलाकार एक विशाल मौका दिन्छ। तस्बिरहरू खुलेर परिणाम उत्पादन उत्पन्न गर्दैन गुणस्तर मा यसरी कुनै विकृति वा गिरावट घुमाइयो हुन सक्छ र आरोहण। तर यी तथ्याङ्कले एकदम उच्च मूल्य पुग्यो छन्। एक ठूलो साथ रिड्रइंग लागि, स्क्रिनमा फरक सदिश तत्व संख्या थप प्रसंस्करण शक्ति आवश्यक हुन सक्छ जब कि तपाईं चित्र परिवर्तन प्रत्येक समय, यो recalculated छ।
किनभने यसको विशिष्टता भेक्टर ग्राफिक्स को श्रृंखला लागि कार्टून क्यारेक्टरहरू रेखाङ्कन गर्दा फन्टहरू मा, लोगो डिजाइन मा मुख्य रूप प्रयोग गरिन्छ, विज्ञापन मा, डिजाइन, आदि
कम्प्युटर ग्राफिक्स रेखापुंज र सदिश दुवै यस्तो प्रकार बारे endlessly कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ पनि अधिक रोचक प्रकार छन् - तीन-आयामी ग्राफिक्स।
अघिल्लो दुई-आयामी embodiments मा, कुनै पनि तस्वीर तत्व प्रत्येक बिन्दुमा को स्थिति वर्णन गर्न 3D मा दुई निर्देशांक मात्र वर्णन गरिएको छ भने पहिले नै तीन निर्देशांक आवश्यक छ। यसरी देखि कागज को एक पानामा कोरिएका वर्ग यसको अवस्थित मापदण्डहरू गर्न घन बनाउन गर्न मात्र एक अतिरिक्त थप गर्न आवश्यक छ।
तपाईं प्रसिद्ध चलचित्र "अवतार" देखेको छु भने, त्यसपछि ऊ पूर्ण तीन आयोमी ग्राफिक्स प्रयोग संग कम्प्युटरमा सिर्जना गरिएको थियो भनेर थाह रुचि हुनेछ। र लगभग सबै स्क्रिन पीसी देखा र खेल सांत्वना तीन आयोमी मोडेल को सम्पादक गर्न समान छन्। 3D ग्राफिक्स गणना प्रदर्शन छविको मापदण्डहरु प्रस्तुत गर्न शक्ति धेरै आवश्यक छ, त्यसैले अनुकूलन र यो ढाँचा काम बढाउने अवसर खोज्न एक मिनेट लागि बन्द छैन। तर, दुर्भाग्य, विधि को व्यापक विकास तीव्र भन्दा प्रबल छ। ग्राफिक्स कार्ड प्रशोधन लागि क्षमता वृद्धि, स्मृति र प्रोसेसर आवृत्ति को मात्रा वृद्धि छन्।
कम्प्युटर ग्राफिक्स सबै प्रकारका सबैतिर प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले मानव गतिविधि यस क्षेत्रको अध्ययन गर्ने - धेरै उपयोगी र होनहार व्यायाम।
इन्टरनेट वेब को सन्दर्भ मा NSLookUp टोली र DNS नाम
कसरी तपाईंको TV मा आफ्नो कम्प्युटरबाट छवि प्रदर्शन गर्न: तपाईंलाई थाह र के गर्न आवश्यक छ
आईपी टेलीफोनी र यसको मुख्य विशेषताहरु
काम खोजी लागि सबै भन्दा राम्रो साइटहरु: सूची विवरण र समीक्षा
नाउ Eskimos र अझै पनि सान्दर्भिक
कसरी जाडो लागि बन्दागोभी लागि स्वादिष्ट marinade बनाउन
औषधि "Fullflex"। समीक्षाहरू, अनुप्रयोगका विशेषताहरू, चिकित्सकीय क्रियाकलाप
आफ्नो हातमा तातो धूम्रपान माछा स्मोकहाउस। घर स्मोकहाउस
"Passazhiks": प्रयोगको लागि निर्देशन। "Passazhiks": प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ, वास्तविक समकक्षों
कि arboreal squirrels संकेत? संरचनात्मक सुविधाहरू
अनुमति 777 कसरी सेट गर्न?